Mifampizara Lahatahiry Amin’ny Departemantan’ny Fitaterana Ao Moskoa Ankehitriny Ny Uber · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2016 6:52 GMT
Notaterin'ny sampana fampahalalam-baovao RBC fa nomen'ny departemantan'ny fitaterana ao Moskoa 90 andro ny Uber, servisim-pikomandiana taxi lehibe indrindra eto ambonin'ny tany, hahazoana antoka fa manana lisansa avy amin'ny fanjakana avokoa ireo mpitondra taxi rehetra misoratra anarana ao aminy. Na ny departemanta na ny servisy misahana ny gazety ao amin'ny Uber dia samy manamarina ny fisian'ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa.
Nanizingizina ny manampahefana ao amin'ny renivohitra rosiana fa nanao soniam-piarahamiasa tamin'izy ireo tamin'ny 2015 ny Uber, saingy nikiry nangataka andro mbola hifampiresaka amin'ny mpitantana ambony any San Francisco kosa ny orinasa. Tamin'ny Febroary 2016 aza moa ny departemantan'ny fitaterana ao Moskoa efa nandrahona hitory ny Uber sy handrara azy tsy hiasa ao Moskoa raha tsy manatanteraka ny fifanarahana takiana amin'ny resaka lisansa ry zareo. Nilaza ihany koa ny loharanom-baovaon'ny RBC fa nitsidika an'i Moskoa ny mpitantana ambony tao amin'ny Uber mba hanao fifampiraharahana sy hangataka hahazo hiditra amin'ny lahatahirin'ny Minisiteran'ny Atitany hanao fanamarinana ny rakitry ny heloka bevava vitan'ny mpamily. Tsy nahazo fankasitrahana avy amin'ny departemantan'ny fitateran'ny tanàna izany fangatahaka izany, izay nilazan'ny manampahefana fa tsy takatry ny fahefany ny fampahafantarana tahaka izany.
Ankoatra ny fiasana miaraka amin'ny mpamily “ara-dalàna” ihany, ny fifanarahana dia manery ny Uber hizara ny lahatahirim-pifamoivoizan'ny fiarany amin'ny manampahefanan'ny fitaterana ao an-tanàna. Ny lahatahirin'ny fiara Uber sy ny fivezivezeny ao an-tanàna dia heverina ho mandalo ao amin'ny Foibem-Pandaminana ny Fifamoivoizana an'ny fiadidiana ny tanànan'i Moskoa izay inoan'ny manampahefana fa hanatsara ny asan'ny rafitra vaovaon'ny fitantanana ny fitaterana izay manangona ireo lahatahiry avy amin'ny tambajotram-pitaterana monisipaly isan-karazany sy manaramaso ny fifamoivoizana eo noho eo.
Kely ny zavatra fantatra amin'izay ampiasan'ny manampahefanan'i Moskoa ireo lahatahiry avy amin'ny mpitatitra miara-miasa amin'izy ireo, ankoatra ny fanangonana azy miaraka amin'ny fampahafantaran'ny fitateram-bahoaka tohanan'ny fanjakana. Ny Rafi-pandaminana ny fitaterana ao Moskoa dia mampiasa fomba maro hanaraha-maso sy hanangonana ny lahatahirin'ny fifamoivoizana, tafiditra amin'izany ny rafitra fanaraha-maso GPS, tambajotram-panarahamaso amin'ny fakantsary handraketana ireo fanitsakitsahana lalam-pifamoivoizana, fakantsary amin'ny parking, fitaovana fandaminana ireo jirom-piampitana arabe, ary ireo rafitra fanairana natao ho an'ny mpamily sy ny mpandeha.
Amin'izao fotoana izao ny Uber dia miasa amin'ny tanàna 400 amin'ny firenena 68 manerana izao tontolo izao. Ao Rosia ny servisy dia vonona ao amin'ny tanàna miisa valo, saingy efa niteny tamin'ny RBC i Ryan Graves, Filoha Lefitry ny Uber, fa manam-pikasana hiasa amin'ny tanàna rosiana 17 ny orinasa mandra-pahatapitry ny taona 2016.